Reach7: Tinye ndị na-ege ntị n'ọtụtụ asụsụ na Social Media | Martech Zone
Iru 7 chọrọ ime ka ọ dịrị ndị mmadụ na azụmaahịa mfe ịmụba mmekọrịta ha na ibe ha n'ụwa niile. Na Reach7, ndị ọrụ na-amata ma soro ndị na-ege ntị kachasị mkpa na mgbasa ozi mmekọrịta na-adị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Usoro ha na-enyere ndị ọrụ aka iwulite ndị na-ege ntị dị mkpa na ahịa mpaghara ha ma ọ bụ rụọ ọrụ nke ọma itinye aka na ahịa ụwa. Ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịkọwapụta tweets n'ihe karịrị asụsụ iri asatọ nke ụwa a na-asụ. Emechara 80% nke ntụgharị asụsụ n'ime otu awa, ọtụtụ n'ime obere oge.
Ọzọ Reach7 Atụmatụ
Uto ndi na ege nti - Too site na ezubere iche njikọ aka. Chọpụta ndị mmadụ na ọdịnaya ị ga-eso, dịka na ịkekọrịta.
Lenye ọkwa - Chekwaa oge na ọkwa anyị pụrụ iche nke na - achọta nsonazụ kacha mma.
Tụọ ihe ịga nke ọma - Ihe akaebe di na pudding. Nweta onu ogugu kwa ubochi, otu izu uka esi etinye aka na ndi n’agha.
Chọpụta Twitter - Iru ahịa 80 + ahịa na nsụgharị mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na-enweghị ntụpọ wuru na ya.
Nkeji ndị na-ege ntị - Mepụta ndị iche na-ege gị ntị na mkpọsa ka ị nwee ike ilekwasị anya na otu dị iche iche na ụbọchị dị iche iche.
Research - Hụ akara ukwu n'ịntanetị nke ndị niile dị mkpa dị ka LinkedIn ha, blog, Pinterest wdg.
Gbalịa Reach7 n'efu
Reach7 nwekwara aHootsuite Ngwa mgbakwunye, yabụ ị nwere ike iji ya rụọ ọrụ ozugbo na gịHootsuite dashboard ka ịtọọ oge ma bipụta Tweets.
Reach7 na-enye atumatu ato:
Atụmatụ Starter, ọrụ bụ n'efu nke zuru oke maka ndị ọ bụla chọrọ ịbawanye njikọ aka mgbasa ozi ha.
Atụmatụ zuru ezu, $ 19.99 / ọnwa, dị mma maka azụmaahịa, ụlọ ọrụ e-commerce, na ngalaba azụmaahịa chọrọ itinye ndị na-ege ntị ezubere iche na mgbasa ozi mgbasa ozi.
N'ikpeazụ, atụmatụ Pro na $ 59.99 / ọnwa kachasị mma maka azụmaahịa nwere ọtụtụ ngalaba ọrụ karịa ihe karịrị otu ahịa, yana ndị na-ewe ndị ọrụ na obere ụlọ ọrụ.
Reach7 nwere ihe karịrị ndị ahịa 5,000, ọnụ ọgụgụ na-eto kwa ụbọchị ma na-agụnye ụlọ ọrụ dịka Worldpay, Re / Max, Sharp, na Viking Direct.
Tags: hootsuite ngwa mgbakwunyentughari mmaduimekọ ihe ụwaotutu asụsụỌtụtụ asụsụiru7elekọta mmadụ mediantinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụtranslationtweetTwitterNkọwa mpaghara twitter